Fanapaha-Kevitra 10 Vaovao Hiarovana Ny Fampiasana Ny Aterineto Amin’Izao Taona 2013 Izao · Global Voices teny Malagasy
Fanapaha-Kevitra 10 Vaovao Hiarovana Ny Fampiasana Ny Aterineto Amin'Izao Taona 2013 Izao	Voadika ny 03 Janoary 2013 23:14 GMT
Zarao: Misahana manokana ny fiarovana ny fahalalaham-pitenenana amin'ny aterineto izahay ato amin'ny Global Voices Advocacy (GVA) . Efa namoaka toro-lalana sy fitaovana izahay hahafahan'ireo mpiserasera hikirakira am-pilaminana ny aterineto, hanakana ny sivana sy hifampiaro ao amin'ny aterineto.
Fampiharana [Fampiasa] avy amin'ny Fitovo Malalaka [Open Source] Android mampiasa ny tambajotran-dohamilina mieli-patrana manerantany ka manafina ny toerana sy ny mombamomba ilay mpisera ny Orbot. Narafitry ny Tor sy ny The Guardian Project ny fampiharana.
Raha toa ianao mpanao gazety matihanina na tia mamoaka vaovao amin'ny alalan'ny fitaovam-pampitan'olo-tsotra vaovao dia mety hahaliana anao ny mitsidika ao amin'ny “Media Workers’ Toolkit for Safer Online and Mobile Practices” [Torolalana ampy ho an'ny Mpiasan'ny Media rehefa mikirakira Finday sy Fiarovan-tena rehefa miserasera] avy amin'ny SpeakSafe. Tolo-kevitra tsara ho an'ny mpamoaka vaovao ho fiarovan-tena sy ireo loharanom-baovaony rehefa mampiasa finday ity torolanana navoakan'ny Internews ity.
Ataovy izay tsy ahafahan'ny governemanta sy ny vohikala mitsongo dia anao, mampiasà Tor. Fitetezana [navigateur] maimaipoana malaza mampiasa ny tambajotra-nà lohamilina [server] mieli-patrana manerantany ahafahana miserasera aterineto tsy misy ahiahy ny Tor nefa manakana ireo asam-panaraha-maso sy mpandinika mpitsidika hahafantatra ny toerana misy anao. Azo trohina amin'ny USB ihany ka ny Tor ary ampiasaina amin'ny solosaina rehetra.
Tsara ny mahatadidy ireo fitsipika fototra mikasika ny fiarovana an-tserasera. Manome torohevitra sarobidy ny Google mikasika izany.
Miresaka fitsipika fototra ihany, tsara vakian'ireo olona maniry hahafantatra bebe kokoa momba ny fiarovana ny teknolojian'ny fanafenantsoratra [cryptage], ny famafàna voaaro ny ny tambajotra virtoalin'ny tena manokana ny pejin'ny ’Electronic Frontier Foundation (EFF) momba ny Fiarovantena amin'ny Fanarahamaso.
Raha bilaogera ianao, indrindra fa miaina any amin'ny tontolom-pamoretana, mieritrereta mialoha amin'izay ataonao raha misy ny fisamborana. Manana ny fikafika sy ny zavatra atao ho an'ireo bilaogera ahiana ho voarahona ato amin'ity lahatsoratra navoakany ao amin'ny Electronic Frontier Foundation ity i Jillian C. York izay ato amin'ny GVA ihany koa.
Miara-dia amintsika ny Lifehacker amin'ny fampiasana rafi-pikirakirana finday mifototra amin'ny Linux antsoina hoe Tails, izay ahafahana miserasera aterineto amin'ny solosaina rehetra nefa “tsy mamela dia.” Tsy tena lavorary tanteraka, fa tsy misy koa ny lavorary, sa tsy izany?
EFF manome torolalana efatra dingana vetivety ahafahanao mampitsahatra ny fidikidirana amin'ny fiainanao manokana [an-tserasera].
Azonao atao ihany koa ny miserasera amin'ny DuckDuckGo, mili-pitadiavana mahasolo, izay tsy mandrakitra ny mombamomba ilay mpiserasera tahaka ny ataon'ny Google.
Arovy ny ango-kevitra [sarobidy] aminao amin'ny alalan'ny fampiasana rindrambaikom-panafenantsoratra amin'ny reninkapila [logiciel de cryptage de disque dur] tahaka ny Truecrypt. Ampiasao amin'ny solosaina anananao rehetra io. Maimaipoana, mora ampiasaina, maivana ary mazava ny Truecrypt, izay afaka manafintsoratra ny ampahany na ny manontolo ny tahirinkevitrao. Ilaina indrindra izy amin'ny fiarovana sy fanafenana ny tahirinkevitrao sarobidy nefa mety hanelingelina ny hafa, indrindra rehefa mandehandeha ka miampita sisintany.
Ity lahatsoratra ao amin'ny Wikipedia ity no hanome fanampim-pampahafantarana ho anao momba ny rindrambaikom-panafenantsoratra sy ny kirakira [rafitra] mifanaraka aminy.
Mety tafaverin'izay liana aminy ho azo jerena na vakiana indray ny tahirinkevitra [ango-kevitra] efa nofafana. Ataovy tsara antoka tsy ho azon'ny hafa kirakiraina intsony amin'ny alalan'ny fampiasana rindrambaiko famafàna ny tahirinkevitrao mety hanohintohina. Iray amin'ny fitaovana be mpikirakira indrindra ho amin'izany ny Eraser, rindrambaiko zaraina maimaipoana vonona ho an'ny Windows. Potehiny ny tahirinkevitra manohintohina amin'ny alalan'ny fiverimberenana manoratra [misokitra] eo amboniny.
Namoaka boky feno antsoina hoe “How To Bypass Internet Censorship“[Ahoana ny fomba idifiana ny sivana amin'ny aterineto] [PDF, pejy 240, 12 MB] tamin'ny fiandohan'ny taona lasa ny Floss Manuals, fikambanana mpanao asa soa miorina ao Holandy miompana manokana amin'ny fampiroboroboana ny fampiasana rindrambaiko maimaipoana [afaka]. Hita ao amin'ny boky avokoa ny fitaovana sy ny teknika maro enti-mandresy ny sivana. Tombanany ao ihany koa ny risika mifandraika amin'ny fampiasana ny fitaovana tsirairay. Misy kinova maivamaivana “Dingana fanombohana” ihany koa vonona eto [PDF, pejy 8, 268 KB].
- Security In A Box [Fiarovana ao anaty boaty iray] avy amin'ny Tactical Technology Collective [fiarahan'ny teknolojia taktika]: Enta-piarovana an-tserasera ampy natao ho an'ny mpikatroka. Azo jerena amin'ny fiteny maromaro.
- “A Practical Guide to Protecting Your Identity and Security Online and When Using Mobile Phones” [Torolalana azo ampiharina ho fiarovana ny momba anao sy ny fiseraseranao amin'ny aterineto rehefa mampiasa finday].avy amin'ny Access. Azo jerena amin'ny fiteny maromaro ihany koa.
Tantaran'ny Solovava farany 20 Mey 2015OkrainaBahanan'ny PayPal Ireo Tolo-bola Ho Fanontàna Ny Tatitr'i Boris Nemtsov Momba Ny Ady Tao Okraina
08 Avrily 2015ThailandyLalàna Vaovao Momba Ny Fandriampahalemana ao Thailand: ‘Manao Ho Toy Ny Tsy Misy Ny Fahalalahana Maneho Hevitra’
23 Febroary 2015Afrika MaintyNohalefahan'ny Governemanta Amerikàna Ny Sazy Mba Hahafahana Manondrana Fitaovam-pifandraisana Ho An'ny Olon-tsotra Ao Sodàna
Vakio amin'ny teny Français, Español, عربي, اردو, srpski, Português, English